Paikady coupon 7 azonao ampidirina ho an'ny areti-mifindra handroahana fiovam-po bebe kokoa an-tserasera | Martech Zone
Talata, Febroary 2, 2021 Talata, Febroary 2, 2021 Julia Krzak
Ny olana maoderina dia mitaky vahaolana maoderina. Na dia marina aza io sentiment io, indraindray, ny paikadim-barotra taloha tsara no fitaovam-piadiana mahomby indrindra amin'ny arsenalin'ny mpivarotra nomerika. Ary misy zavatra antitra sy porofo adala kokoa noho ny fihenam-bidy?
Ny varotra dia niaina fahatairana mafy vokatry ny areti-mandringana COVID-19. Sambany teo amin'ny tantara no nandinika ny fomba fiasan'ny fivarotana antsinjarany amin'ny toe-javatra tsena sarotra. Fanidiana maro no nanery ny mpanjifa hiantsena an-tserasera.
Ny isan'ny fivarotana an-tserasera vaovao manerantany amin'ny sehatra anaovany dia nitombo 20% tao anatin'ny tapa-bolana farany tamin'ny martsa 2020.
Na dia malaza be aza ny fiantsenana nentin-drazana sy an-tserasera, dia nahavita niverina teo amin'ny tongony haingana kokoa ny tontolon'ny nomerika. Fa maninona Ny fihenan'ny fihenam-bidy sy ny kaody promo maharitra amin'ny varotra ho an'ny sehatra ecommerce. Ny magazay fivarotana antsinjarany koa dia nahavita zavatra betsaka mba hitazomana hatrany amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny isan'ny fampiroboroboana sy ny tolotra manintona, izay mitarika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny fiantsenana an-tserasera, vahaolana azo antoka kokoa mandritra ny areti-mandringana.
Inona no mahatonga ny tapakila ho paikady fanarenana COVID mahafinaritra? Raha fintinina, ny fihenam-bidy dia mamela ny marika hampiseho fa miahy izy ireo nefa mijanona amin'ny takatry ny mpanjifa mahalala ny vidiny miaraka amin'ny tetibola tery kokoa noho ny mahazatra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia tiako ny manolotra topy maso anao amin'ireo fampielezan-kevitra coupon mahomby indrindra amin'ny fotoanan'ny tsy fahatokisan-tsena ateraky ny COVID-19.
Ireto ny fampielezan-kevitra momba ny tapakila ambony nataoko ho an'ny ecommerce aorian'ny pandemi:
Kitapo ho an'ny mpiasa tena ilaina
Vidio ny iray, amidy maimaimpoana or roa ho an'ny vidin'ny iray Fampiroboroboana (BOGO)
Vidio ny tapakila fahita matetika
Tapakila fandefasana maimaim-poana
Famporisihana ho an'ny finday
Sintomy ny torolàlana farany ho an'ny paikady marketing amin'ny coupon
Paikady tapakila 1: tolotra ho an'ny mpiasa tena ilaina
Anisan'ireo varotra flash mahazatra sy fifampiraharahana BOGO, ny COVID-19 dia nampalaza ihany koa ny tolotra voafantina sy ny kaody coupon nomen'ny CSR ho an'ny mpiasan'ny hopitaly sy ireo mpandray voalohany (oh: polisy, mpamono afo, sns.).
Adidas nanao izany. Lenovo nanao koa. Azonao atao koa izany. Manolotra fihenam-bidy sy tapakila manokana ho an'ny mpiasa tena ilaina mandritra ny areti-mandringana dia manamafy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny marikao ary mahatonga ny orinasanao ho safidy mazava rehefa miantsena. Ankoatry ny tombontsoa mivantana mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa sy ny CSR, ny fanomezana fifanarahana ho an'ireo miady amin'ny lohalaharana amin'ny areti-mandoza no zavatra mety tokony hatao.
Rehefa miresaka momba ny tsy fivadihan'ny marika aho dia tsy azoko atao ny mamily ny zava-misy fa ny areti-mandringana dia nanova ny fihetsiky ny mpanjifa ho lasa mifantoka kokoa amin'ny lanja. Midika izany fa ny mpanjifa dia azo inoana kokoa ny misafidy ny tolotra mpifaninana raha toa ka tsy misy ny vokatrao na amin'ny lafiny pricier. Marina izany na ho an'ny marika B2C na B2B. Izany no antony mety hahatsapanao fihenam-bidy lehibe amin'ny fanentanana ny mpanjifa ary vitsy ny mpanjifa miverina mividy avy aminao. Ny tolotra coupon dia filokana azo antoka kokoa noho ny fanentanana tsy fivadihana mandritra ny fotoana mikorontana toa izao.
Tonga hatrany amin'ny fanentanana sy kopia ho an'ny tapakila tena ilaina ho an'ny mpiasa dia tsotra, fa ny famantarana ny mpampiasa kosa dia mety hiteraka fanamby lehibe kokoa, arakaraka ny loharanom-pahalalana teknolojia anananao. Soa ihany fa misy fitaovana toa SheerID or ID.me afaka manampy anao amin'izany asa izany. Azonao atao koa ny mampiorina ny fihenam-bidy amin'ny sehatra mailaka toa Beryl, orinasa iray mizara fizika, nanao ho an'ny fampielezan-kevitr'izy ireo COVID-19.
Paikady coupon 2: Fanentanana momba ny tapakila BOGO hanafoanana ny tahiry taloha
Nandritra ny krizy COVID-19, mpivarotra maro no niady mafy hitahirizana ny talantalana. Ny fividianana tahotra, ny tavoahangy lozistialy ary ny fihetsiky ny mpanjifa miovaova dia vao mainka nampitombo ny olana tamin'ny lojika. Soa ihany, ny fampielezan-kevitra amin'ny coupon dia afaka manalefaka ny olan'ny tahiry taloha amin'ny toerana fitahirizan-trano. Ny fampielezana BOGO (Buy-One-Get-One-Free) dia mbola iray amin'ireo famporisihana coupon malaza indrindra hatramin'izao.
Ny fampiroboroboana BOGO dia fomba iray tsara hanamafisana ny famporisihana anao hivarotra sy hivarotra na hamindra ireo vokatra izay tsy mivarotra irery. Raha toa ny areti-mandringana ka nahatonga ny trano fitahirizananao nameno fitafiana nilomano na fitaovana fitobiana dia azonao atao ny manolotra maimaim-poana ny sasany ho an'ny baiko sasany. Ny fampielezan-kevitra BOGO dia miasa tsara miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny soatoavina farany ambany - mety handoa vola bebe kokoa ny mpanjifa ho takalon'ny fanomezana. Fandresena marina. Mitahiry ny habaka fitahirizam-bokatra ianao, ary miakatra ny sandan'ny volanao raha toa ka faly amin'ny vokatra maimaim-poana ny mpanjifa.
Paikady tetika coupon 3: tapakila miorina amin'ny hatetika
Niteraka korontana ny areti-mandringana raha ny tsy fivadihan'ny marika no resahina. Rehefa mamerina mampifanaraka ny safidin'ny marika ny mpanjifa, ny orinasa dia mila mandresy antitra na mitazona mpanjifa vaovao. Mba hijanonana ao an-tsain'ny mpanjifa sy hitazomana azy ireo hiasa mandritra ny fotoana lava kokoa dia azonao atao ny manolotra fanentanana coupon izay mitombo ny sandany amin'ny fividianana vaovao tsirairay. Ity karazana fandrisihana ity dia mandrisika ny varotra miverimberina amin'ny fanomezana valiny azo tsapain-tanana amin'ny fiantsenana amin'ny marikao. Ohatra, afaka manolotra 10% ho an'ny kaomandy voalohany ianao, 20% ho an'ny faharoa ary 30% amin'ny fividianana fahatelo.
Mandritra ny fotoana maharitra dia tokony hieritreritra ny hanangana programa tsy fivadihana koa ianao hanehoana fankasitrahana ireo mpanjifanao lafo vidy.
Paikady tapakila 4: (Tsy dia betsaka) Fivarotana Flash
Ny varotra tselatra dia fomba iray manasongadina ny marikao ary manosika ny mpanjifa hividy haingana. Na izany aza, tsy maintsy tadidinao fa ny COVID-19 dia namorona tontolo fivarotana tsy manam-paharoa izay tsy mandeha foana ny fampiroboroboana tselatra noho ny olana ivelan'ny tahiry sy ny lojika. Mba hanamaivanana ny fahasosoran'ny mpanjifa amin'ny rojom-panolorana tapaka dia azonao atao ny mieritreritra ny hanitatra ny daty fahataperan'ny varotrao. Azonao atao koa ny mandany fotoana bebe kokoa amin'ny kopian'ny varotrao hampidirana azy maika (amin'ny fampiasana ny teny toy ny hoe "anio" na "ankehitriny) hitaona ny mpanjifa handray andraikitra. Amin'ity fomba ity dia tsy hanova ny tolotra omena anao ianao amin'ny daty voafaritra mialoha, hampihena ny enta-mavesatra amin'ny fitazonana ny fampiroboroboana ho an'ireo ekipa teknolojia sy marketing anao.
Paikady paikady 5: fandefasana maimaim-poana
Efa nametraka zavatra tao anaty saretyo ve ianao ary nahita ilay hafatra kely hoe “Manampia $ X amin'ny kaomandinao hahazoana fandefasana maimaimpoana?” Inona no vokatr'izany teo amin'ny fitondran-tenanao? Tamin'ny zavatra niainako manokana dia nijery ny sariitako Amazon aho ary nieritreritra hoe: “Ok, inona koa no ilaiko?”
Ao amin'ny tontolon'ny tendrony amin'ny fivarotana an-tserasera atahorana noho ny areti-mifindra, dia mila mijery isaky ny vazan-tany ianao mba hahitana tombony amin'ny tsena. Ny fandefasana maimaimpoana dia paikady fampiroboroboana tonga lafatra hahazoana ny fifaninananao ary hampirisihana ny fiovam-po bebe kokoa sy ny valin'ny varotra tsara kokoa. Raha mandinika ny trangan-javatra fandefasana maimaimpoana amin'ny fomba fijery ara-psikolojika isika dia mahita fa ity karazana fampiroboroboana ity dia mizara roa ny mpanjifa - ireo mpandany ambany sy ambony. Na dia hitan'ny mpandany vola be aza ny fandefasana maimaimpoana ho fanararaotana ankasitrahana indrindra, ny mpandany ambany dia hahatsapa ny fandefasana maimaim-poana ho toy ny fanerena mba hampiakarana ny sarety amin'ny vidiny kendrena. Ny hafetsena eto dia ny mpanjifa amin'ny farany dia mety handany bebe kokoa fotsiny mba hahatsapany ny fahafaham-po amin'ny fandraisana maimaim-poana.
Ankoatra ny tapakila fandefasana entana maimaim-poana, azonao atao ny mieritreritra ny hanana politikam-piverenana tsara kokoa. Ny goavambe toa an'i Amazon na Zalando dia efa mandresy ny fon'ny mpanjifa amin'ny fandefasana haingana sy maimaim-poana, fotoana fiverenana lavitra ary fandefasana maimaimpoana. Raha te hampiasa vola amin'ny onja ecommerce tampoka ianao dia mila mifanandrify amin'ny haavon'ny mpilalao an-tserasera efa ela. Azonao atao manokana ny manamboatra ny tapakila arakaraka ny tantaran'ny fiverenana hanomezana fifampiraharahana manokana amin'ny mpanjifa tsy afa-mifehy fanimbana na manome valisoa ireo izay mbola tsy namerina entana tamin'ny fotoana voatondro mialoha.
Paikady coupon 6: tapakila mpiara-miasa
Tsy nahagaga raha toa ka nihantsy indrindra ny areti-mandringana ho an'ireo orinasa kely sy salantsalany izay misy faran'izay kely amin'ny Internet. Raha orinasa toy izany ianao, dia afaka manatona marika hafa izay manolotra vokatra mifameno ho anao ary manolotra fisondrotana am-paosy miaraka amin'ny tapakila ho an'ny serivisinao. Ohatra, raha manolotra kojakojam-bolo ianao, dia afaka manatona marika fanaovana haingon-tarehy volo na saloon-bolo.
Etsy ankilany, raha tsy voatsimbina amin'ny vokadratsin'ny krizy ara-pahasalamana ny orinasanao 2020, dia afaka manatona ireo mpivarotra kely ianao ary manome azy ireo fiaraha-miasa ihany koa. Amin'ity fomba ity, azonao atao ny manampy ny orinasa kely eo an-toerana ao amin'ny faritra misy anao ary mampivelatra tolotra fampiroboroboana mahaliana ho an'ny mpihaino anao. Ankoatr'izay, miaraka amin'ity karazana fampielezana coupon coupon ity, dia manitatra ny tratran'ny orinasanao ianao amin'ny alàlan'ny fisehosehoana amin'ny tsena vaovao tanteraka.
Paikady coupon 7: tapakila mahasoa amin'ny finday
Amin'ny maha olona mihabetsaka miantsena amin'ny finday avo lenta, mitaky izy ireo fa vonona amin'ny finday ny ampahany rehetra amin'ny dia mividy. Ahoana no ifandraisan'ity tranga ity amin'ny tapakila? Raha efa nianatra nampiasa ny fampiasana mailaka mamaly amin'ny tapakila ianao, dia tonga ny fotoana ho an'ny dingana manaraka - fanamafisana ny traikefa fanavotana kupon miaraka amin'ny kaody QR. Amin'ny alàlan'ny fanomezana kaody amin'ny endrika roa (lahatsoratra sy QR) dia azonao antoka fa azo avotana amin'ny Internet sy ivelan'ny Internet ny fihenam-bidy. Izay no dingana voalohany hanaovana ny kuponanao-vonona.
Ankoatry ny kaody QR, azonao atao koa ny manitatra ny fantsom-pandefasana coupon anao hampidirina hafatra an-tsoratra sy fampandrenesana fanosehana. Fa maninona Tsy ny mailaka no fantsona tsara indrindra hisintonana ny sain'ny mpanjifa avy hatrany ary hiteraka fifandraisana haingana. Ny fantsom-pandefasana finday dia mifamotoana tsara amin'ny tolotra tapakila miorina amin'ny geolocation ary ahafahanao mihetsika haingana amin'ny hetsika ataon'ny mpampiasa manokana, toy ny toetr'andro tafahoatra na tsy fiasana.
Misy paikady coupon isan-karazany hanampy anao hanosika ny paikady coupon anao handroso. Na aiza na aiza misy anao amin'ny fanovana nomerika anao, ny tapakila dia afaka manampy anao hamantatra ny fandefasan-kafatrao, hanandramana amin'ny fantsom-pandefasana vaovao, ary hanatsara ny teti-bidim-pandrosoana amin'ny tsena mikorontana.
Ny paikadim-barotra amin'ny coupon anao mandritra ny areti-mandringana
Rehefa nampitombo ny fiovan'ny zava-niomerika ny valanaretina coronavirus, dia nanjary lany andro ny fomba nentim-paharazana amin'ny fomba iray amin'ny fampiroboroboana. Ao anatin'ny tontolo ecommerce COVID-19 mifaninana, ireo marika dia tsy maintsy nampiasa fihenam-bidy mba hisarihana ireo mpiangona mahatsapa ny vidiny ary hanome lanja fanampiny eo amin'ny tsena tototry ny tolotra mitovy amin'izany.
Ny paikady tapakila voahevitra tsara dia tsy maintsy ananana ho an'ny ankamaroan'ny orinasa ecommerce raha toa ka mijanona eo an-tampon'ny sain'ny mpanjifa hatrany ny fikasan'izy ireo. Miaraka amin'ny taha ambony amin'ny vidim-panavotana coupon any Etazonia sy manerantany, ny marika dia tokony hiditra amin'ny fahafaha-mihena be. Fa na iza na iza fihenam-bidy sy fampielezan-kevitra tapakila tokony harahinao?
Ity lahatsoratra ity dia mitanisa ireo paikady fampielezan-kevitra tapakila ambony indrindra izay filanao tsara indrindra (sy mahomby indrindra) amin'ny fotoanan'ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny tsena lehibe - manomboka amin'ny tapakila ho an'ny mpiasa tena ilaina, fampirantiana maimaim-poana mankany amin'ny traikefa fanandramana vonona amin'ny finday. Na aiza na aiza misy anao amin'ny dianao fanovana dizitaly, ny tapakila dia afaka manampy anao hamantatra ny fandefasan-kafatrao, hanandramana amin'ireo fantsom-panaterana vaovao, ary hanatsara ny teti-bola fampiroboroboana amin'ny tsena mikorontana.
Tags: tapakila bogopaikady coupontapakilaCovid-19tapakila varotra tselatratapakila matetikahiteraka fiovam-po an-tseraseratapakila findaytapakila mahasoa amin'ny findayareti-mifindratapakila mpiara-miasatapakila aorian'ny e-commercemanamarina
Manampahaizana manokana momba ny fampandrosoana atiny manana traikefa amin'ny marketing nomerika. Nahazo diplaoma vao haingana tao amin'ny American Studies and English Culture. Manana traikefa amin'ny fiasana amin'ny tontolo SaaS mifaninana. Variana amin'ny zava-drehetra amin'ny marketing maoderina, analytics, ary ny fanenomana ny haitao ambany kaody ambany ambany amin'ny fizotry ny asa. Mpanoratra B2B mahaliana ho an'ny mpihaino isan-karazany, ao anatin'izany ny mpamorona, mpivarotra ary mpitantana, ary fananana marobe - tranokala, lahatsoratra, fandinihana tranga, scripta video, sns. Miasa amin'ny Voucherify.io amin'izao fotoana izao, miatrika ny paikadin'ny fananganana atiny, marketing video, ary SEO. Amin'ny tsy miankina, mpankafy lalao video, tantara foronina amin'ny literatiora ary fandalinana veganism.